ဂျာမနီရှိအများစုမှာအံ့မခန်းရဲတိုက် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဂျာမနီရှိအများစုမှာအံ့မခန်းရဲတိုက်
အားဖြင့် Liam Mallari 23/04/2019
မီးရထားခရီးသွားလာ, မီးရထားခရီးသွားလာဂျာမဏီ, မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ, ဥရောပခရီးသွား
ဂျာမဏီသဘာဝကျကျလှပနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်. သင်တို့မူကားရဲတိုက်အကြောင်းကိုစဉ်းစား start သည့်အခါ, သငျသညျ ပို. ပင်ကခစျြလိမျ့မညျ. ဂျာမဏီသောကွောငျ့ကြောင်းနှင့်အားလုံး, အမြားအပွားသည်နှင့်အညီ, ကမ္ဘာ၏ရဲတိုက်မြို့တော်.
သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဂျာမနီမှာအံ့မခန်းရဲတိုက်၏တစ်ဖွဲ့လုံးအိမ်ရှင်ရှိပါတယ်. ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သည်သူတို့အကြားသာအလှဆုံးသူမြားကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်. ကျနော်တို့သည်လည်းသင်တို့ကိုသင်မည်သို့လုပ်နိုင်အပေါ်အချက်အလက်ကိုပေးလိမ့်မယ် ရထားသူတို့ကိုရောက်ရှိ, ယင်းမှ အားလုံးရထားချစ်သူများ၏မွေ့လျော်!
Neuschwanstein ရဲတိုက် – The Most Spectacular Castle in Germany
အတော်များများကလောကဓာတ်လုံးကိုအတွက်အလှဆုံးရဲတိုက်တစ်ဦးအဖြစ်သိ, မရင့်ဂျာမဏီ. မလိုလျှင်, ဒါဟာအမှန်တစ်ခုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ခြင်းများအတွက်ကျော်ကြားသောင် ဒစ္စနေး ရဲတိုက်. သင်ဤမှာကြည့်ယူတဲ့အခါမှာ နတ်သမီးပုံပြင် ရဲတိုက်, သငျသညျအဘယျကွောငျ့နားလည်သဘောပေါက်. ကဂျာမနီမှာအများဆုံးအံ့မခန်းရဲတိုက်အကြားင်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်စင်စစ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်!
Schloss Neuschwanstein ခြောမြတ်တော်မူ၏, ဒါပေမယ့်သင်မည်သို့ရှိရကြဘူး? ဂျာမဏီနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုကိုအများဆုံးသောနေရာများဖြစ်ပါသည် မီးရထားကနေတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်. ရဲတိုက်မှအနီးဆုံးရထားဘူတာ Fussen ၌တည်ရှိ၏. သို့သျောလညျး, သငျသညျမှဘူတာရုံရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် မြူးနစ် သို့မဟုတ်အခြားကြီးမားသောဂျာမန်မြို့ကြီးများ.
Hohenzollern – The Most Magical Castle in Germany
Hohenzollern ရဲတိုက် is not only among the most spectacular castles in Germany – it’s the most မှော် တစ်. သင့်အနေဖြင့်ထဲမှာရှာတှေ့နိုငျ Baden-Wurttemberg ၏ပြည်နယ်, စတုဂတ်မြို့အနီး. Baden-Wurttemberg ပြည်နယ်အများဆုံးဖြစ်ပါသည် underrated ဂျာမနီမှာတဦးတည်း, ဒါပေမယ့်သင်ဤရဲတိုက်ကိုတွေ့မြင်တစ်ချိန်က, သင်သည်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ခညျြနှောငျနေ!
သို့သျောလညျး, ရဲတိုက်မှရတဲ့ပြဿနာရှိနိုင်ပါသည်, ဒါဟာလုံးဝတန်ဖိုးရှိဆိုသော်ငြား. အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းစတုဂတ်ကနေ Hechingen မှရထားယူရန်ဖြစ်ပါသည်. ထိုအခါသင်ကယူရန်လိုအပ်ပါတယ် ရှည်လျားသောတိုးမြှင့် နှင့်ရဲတိုက်ကိုရောက်ရှိမယ့်မတ်စောက်သောတောင်ကုန်းကိုတက်. ငါနောက်တာပါနော်! ရဲတိုက်မြို့မှအတော်လေးနီးကပ်သကဲ့သို့သင်တို့ Hechingen နေလွန်းဘတ်စ်ကားတစ်ခုသို့မဟုတ်တက္ကစီယူနိုင်ပါသည်.
Hohenzollern Sigmaringen – The Grandest Castle in Germany
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှိမ့်ချအမြင်, ဂျာမနီမှာအများဆုံးအံ့မခန်းရဲတိုက်၏အဘယ်သူမျှမစာရင်း Hohenzollern Sigmaringen ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာသင်သည်အစဉ်အပေါ်ရှိသင့်မျက်စိ lay လိမ့်မယ်အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကွီးမားရဲတိုက်င်! ထိုအလုံအလောက်မပါလျှင်, ဒါကြောင့်လည်းရှင်းရှင်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာင်.
Hohenzollern-Sigmaringen Baden-Wurttemberg သို့ဖြစ်. ဖြစ်ပါသည်; လူအအဖြစ်ပြည်နယ်ကိုခြီးမှမျးကြသည်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ဒါကြောင့်လုံးဝပျက်စေမယ့် ဂျာမနီမှာအလှဆုံးတဦးတည်း!
As for travelling – since you can find the castle inatown, ဒါကြောင့်ရထားအလွယ်တကူဖွင့်. အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း Ulm သို့မဟုတ်စတုဂတ်ကနေရထား ယူ. ထို့နောက်ရဲတိုက်မှလမ်းလျှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
Ulm ရထားမှ Frankfurt
Leipzig Ulm မှရထား
Nuremberg Ulm မှရထား
အဆိုပါရဲတိုက်ငယ်လေးတစ်ကုန်းပေါ်မှာတစ်ဦးတည်းရပ်တည်, ထိုသို့အမှန်တကယ်ကြည့် စိတ်ဓါတ်ထိခိုက်သော. သို့သျောလညျး, သင်ကနေဆဲစည်ပင်ရဲ့အကောင့်သို့ယူတစ်ချိန်ကဒါအထီးကျန်မဟုတ်ဘူး! ဟုတ်ကဲ့, အဆိုပါ Eltz မိသားစု များအတွက်ရဲတိုက်ကျင်းပခဲ့ပါသည် 33 သားစဉ်မြေးဆက်!
အခါအဲဒီမှာလာပြီမှကြွလာ, သင်တစ်ဦးလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်ရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် ဘတ်စ်ကား သို့မဟုတ် Hatzenport ကနေတက္ကစီ. သို့သျောလညျး, ကနေရထားအားဖြင့်သေးငယ်တဲ့မြို့ဖို့လုံးဝဖြစ်နိုင်သမျှရဲ့ Koblenz – the nearest large city.
ရထား Hatzenport မှ Frankfurt
ရထား Hatzenport မှ Bonn
ရထား Hatzenport ဖို့ Cologne
ရထား Hatzenport မှ Dusseldorf
ဒါကြောင့်အဲဒီမှာသင်ရှိသည်, ဂျာမနီမှာအများဆုံးအံ့မခန်းရဲတိုက်တစ်ဦးပြည့်စုံစာရင်း. ငါတို့သည်သင်တို့သင်၏နောက်ခရီးစဉ်အပေါ်သူတို့ထဲကအနည်းဆုံးလာရောက်လည်ပတ်လိမ့်မယ်မျှော်လင့်! သင်တို့သည်ဤရဲတိုက်မှရထားဖြင့်ခရီးသွားအကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, အခမဲ့ခံစားရ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အချိန်မရွေး.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-spectacular-castles-germany/– (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ fr / သို့မဟုတ် / pl နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ကပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#deutschland ရဲတိုက် europetravel trainjourney Tranride ရထားအကြံပေးချက်များ ခရီးသွား travelgermany
မီးရထားခရီးသွားလာ, မီးရထားခရီးသွားလာသြစတြီးယား, မီးရထားခရီးသွားလာဘယ်လ်ဂျီယံ, မီးရထားခရီးသွားလာဒိန်းမတ်, မီးရထားခရီးသွားလာပြင်သစ်, မီးရထားခရီးသွားလာဂျာမဏီ, မီးရထားခရီးသွားလာဟန်ဂေရီ, မီးရထားခရီးသွားလာအီတလီ, မီးရထားခရီးသွားလာလူဇင်ဘတ်, မီးရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, မီးရထားခရီးသွားလာ, မီးရထားခရီးသွားလာသြစတြီးယား, မီးရထားခရီးသွားလာဗြိတိန်နိုင်ငံ, မီးရထားခရီးသွားလာပြင်သစ်, မီးရထားခရီးသွားလာဂျာမဏီ, မီးရထားခရီးသွားလာအီတလီ, မီးရထားခရီးသွားလာဗြိတိန်, ဥရောပခရီးသွား
မီးရထားခရီးသွားလာ, မီးရထားခရီးသွားလာနော်ဝေ, မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 မေလ 2020ဇွန် 2020ဇူလိုင် 2020သြဂုတ် 2020စက်တင်ဘာ 2020အောက်တိုဘာ 2020နိုဝင်ဘာ 2020ဒီဇင်ဘာ 2020ဇန်နဝါရီ 2021ဖေဖော်ဝါရီ 2021မတ်လ 202121ပြီ ၂၀၂၁